အမြဲတမ်းတွစ်တာအကောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - တွစ်တာ - 2019
Futuremark ကုမ္ပဏီစမ်းသပ် packages များ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 3D-performance ကိုစာရင်းစစ်ညီမျှဖို့ကအလွန်ခက်ခဲရှာပါ။ 3DMark စမ်းသပ်မှုပေါင်းများစွာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ရေပန်းစားဖြစ်လာကြပြီသူတို့အမြင်အာရုံကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်, သူတို့ရဲ့အမူအကျင့်, အရှိနျခကျခဲအချည်းနှီးဖြစ်၏, သို့သော်ရလဒ်များကိုအမြဲတည်ငြိမ်ပြီးပြန်လုပ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအဆက်မပြတ်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များကိုနိုင်ငံတကာထုတ်လုပ်သူနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဒါ Futuremark ရဲ့အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးယင်းစံနှုန်းများ, အများဆုံးရိုးသားတရားမျှတတဲ့စဉ်းစားနေကြသည်။
တပ်ဆင်နှင့်အစီအစဉ်ကိုပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးနောက်အသုံးပြုသူကိုပင်မပရိုဂရမ်ဝင်းဒိုးကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။ ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်, သင်က၎င်း၏စနစ်, Processor ကိုနှင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်မော်ဒယ်အဖြစ် operating system နဲ့ RAM ကိုပမာဏနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏အကျဉ်းဖော်ပြချက်ဆနျးစစျနိုငျသညျ။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ခေတ်သစ်ဗားရှင်းရုရှားဘာသာစကား၏အပြည့်အဝထောက်ခံမှုရှိသည်, ထို့ကြောင့် 3DMark အသုံးပြု. ပုံမှန်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတိမ်တိုက်ဂိတ်စမ်းသပ်ပြီးခံရဖို့ကိုစတင်အသုံးပြုသူလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါဟာချမှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုလျစ် 3DMark ပင်အခြေခံဗားရှင်းအချို့အတွက်လက်ရှိကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်, သူတို့တစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့စမ်းသပ်မှုသယ်ဆောင်။ မိုဃ်းတိမ်ကိုဂိတ်အခြေခံအကျဆုံးနှင့်သူတို့ထဲကရိုးရှင်းတဲ့တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
စတင် button ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုပေါ်လာပါနဲ့ PC components များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းစတင်သည်။
စစ်ဆေးနေစတင်ပါ။ မိုဃ်းတိမ်ကိုဂိတ်ကသူတို့ကိုနှစ်ခုပါ။ မိနစ်အမိန့်အသီးအသီး၏ကြာချိန်, နှင့်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်တစ်ဦးသည် frame နှုန်း (FPS) ကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ။
ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်နေတဲ့ဂရပ်ဖစ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ဗီဒီယိုကဒ်၏ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျးမြားစှာသောထိပ်များကလုပ်ငန်းများ၌သည်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အမှုန်၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ဒုတိယတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသံအတိုးအကျယ်အလင်းရောင် Post-အပြောင်းအလဲနဲ့သက်ရောက်မှုတစ်ဦးလျှော့အဆင့်မှာအသုံးပြုသည်။
ဒုတိယစမ်းသပ်မှု - ကိုယ်ထိလက်ရောက် oriented နှင့် CPU ကိုအပေါ်တစ်ဦး strain ချပြီးကြောင်းမျိုးစုံတစ်ပြိုင်နက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Simulator, လုပ်ဆောင်တယ်။
3DMark ရဲ့အဆုံးမှာသူ့ရဲ့ကျမ်းပိုဒ်၏ရလဒ်များကိုအပေါ်ပြည့်စုံသောစာရင်းဇယားကိုငါပေးမည်။ ဤရလဒ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. သို့မဟုတ်အခြားအွန်လိုင်းသုံးစွဲသူများက၏ရလဒ်များကိုနှင့်အတူကနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
3DMark အတွက် benchmarks
အဆိုပါအသုံးပြုသူ tab ကိုမှသွားနိုင်ပါတယ် "စမ်းသပ်မှု"အဘယ်မှာရှိလူအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်နိုင်သောစမ်းသပ်စွမ်းဆောင်ရည်။ သူတို့ထဲကတချို့ကမီးဘေး Strike က Ultra ဥပမာ, ကိုပရိုဂရမ်များ၏ paid version ကိုသာရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပြုထားရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်, သင်က၎င်း၏ဖော်ပြချက်ကြောင့် check လုပ်ထားပါလိမ့်မည်ဟူသောအချက်ကိုနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရနိုငျသညျ။ ၎င်း၏ခြေလှမ်းများအချို့သို့မဟုတ်အလိုရှိသော resolution ကို select လုပ်ပါ, နှင့်အခြားဂရပ်ဖစ် settings ကို disable လုပ်ဖို့, အပိုဆောင်းအခြေခံစံနှုန်း setting များကိုပို့ချရရှိနိုင်။
ဒါဟာ 3DMark အတွက်စမ်းသပ်မှုများအများစု run ဖို့ထိုကဲ့သို့သောကျနော်တို့ကအနည်းဆုံး dual-core processor နှင့် RAM ကိုလည်းအနည်းဆုံး 2-4 gigabytes လိုအပ်ပါတယ် DirectX ကို 11 နဲ့ 12 အဘို့အထောက်ခံမှုနှင့်အတူဂရပ်ဖစ်အဖြစ်ခေတ်မီအစိတ်အပိုင်းများ, လိုအပ်သည်သတိပြုသင့်ပါတယ်။ စနစ် parameters များကိုမဆို user ကစမ်းသပ်ဖွင့်ရန်မသင့်တော်ပါလျှင်, ထို program 3DMark ပြောအကြောင်းပါ။
ချမှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုလျစ်၏ဂိမ်းကစားတို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုမှာတစ်ဦးမီးဘေး Strike ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ High-end PC များအဘို့ဒီဇိုင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပါဝါအကြောင်းကိုအလွန်ဇီဇာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှု - ဂရပ်ဖစ်။ ဒါဟာမြင်ကွင်းတစ်ခုကထုထည်ကြီးမားသောအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ပင်အများဆုံးခေတ်သစ်ဂရပ်ဖစ်ကတ်များအများဆုံး setting များကို Fie Strike နှင့်အတူလုံလောက်စွာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းငှါမတတ်နိုင်ပါ, မီးခိုးနှင့်ပြည့်ဝ၏။ SLI ကိုတို့ကသူတို့ကိုဆက်သွယ်အများအပြားကဗီဒီယိုကတ်များနဲ့သူ့ရဲ့ system ကိုစုဆောင်းရန်အတော်များများကဂိမ်းကစား။
ဒုတိယစမ်းသပ်မှု - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ ဒါဟာအလွန်အပြောင်းအလဲနဲ့ပါဝါကပါဝင်ပတ်သက်သည့်များစွာသော Simulator နှင့်ပျော့ပျောင်းသောစိုင်အခဲပြေး။
အဆုံးစွန်သောပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ် - က tessellation, Post-processing သက်ရောက်မှု, simulated မီးခိုးကိုအသုံးပြုသည်, etc, ရူပဗေဒခြင်း simulation ပြေး
အချိန်သူလျှိုအရှိဆုံးအဆင့်မြင့်တွက်ရင်သည်ဂရပ်ဖစ် adapter DirectX ကို၏နောက်ဆုံး 12-ဒုတိယဗားရှင်း၏ပံ့ပိုးမှုရှိရမည်အကြောင်း, ထို့အပြင်အသုံးပြုသူရဲ့မော်နီတာခွင့် မှလွဲ. ထိုသို့အားလုံးနောက်ဆုံးပေါ် API ကို functions များ, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကွန်ပျူတာ, multithreading, ဒါကြောင့်အပေါ်တစ်စုံတစ်ရာစစ်ဆေးခြင်းသည်။ ဃများအတွက်ထောက်ခံမှုရှိပါတယ် ဒါဟာ 1440 × 2560 ထက်မနည်းဖြစ်သင့်သည်။
ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုကြီးတစ်ခုစဒြပ်စင်အရေအတွက်အဖြစ်အရိပ်နှင့် tessellation များ၏ဂရပ်ဖစ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုပိုပြီးဂရပ်ဖစ်ထုထည်ကြီးမားသောအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုသည်, ဒဏ်ငွေအမှုန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
Next ကို Processor ကိုပါဝါစစ်ဆေးမှုများဖြစ်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များသင့်လျော်သောအဆင့်မှာရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှရာနှင့်အတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျိုးဆက်သုံးလုပ်ပါတယ်ကြောင်း Intel က၏ထံမှ AMD ၏, မှဘတ်ဂျက်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏တန်ခိုးမဟုတ်ပါဘူး။
က Sky ရေငုပ်သမား
က Sky ငုပ်အထူးသ DirectX ကို 11 ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်သဟဇာတများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ benchmark အလွန်ခက်ခဲမရှိ, ပင်သင်သည်ထိုသူတို့အတွက်မိုဘိုင်းပရိုဆက်ဆာနှင့် embedded ဂရပ်ဖစ်ချစ်ပ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ပိုမိုအစွမ်းထက် counterparts တွေကိုပုံမှန်ရလဒ်ကိုအောင်မြင်ရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆီးအတားမရှိကို PC များ၏သုံးစွဲသူများကနှုနျးသငျ့သညျအောင်မြင်ဖို့အလားအလာမရှိပါ။ resolution image ကိုက Sky ထူးခြားသောအများသောအားဖြင့်မော်နီတာမျက်နှာပြင်ရဲ့ဇာတိ resolution ကိုမှကိုက်ညီ။
အဆိုပါဂရပ်ဖစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှစ်ခုအသေးစားစမ်းသပ်မှုပါဝင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းမှာ tessellation အပေါ်တိုက်ရိုက် illumination နှင့်အလေးပေးအသုံးပြုသည်။ အဲဒီအခြိနျမှာ, ဒုတိယစမ်းသပ်မှုဇယားဝန်ကုသမှုစနစ်က pixels ကိုနှင့်ကွန်ပျူတာ shader အတွက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအရာတစ်ဦးထက်ပိုအဆင့်မြင့်အလင်းရောင်နည်းစနစ်, အသုံးပြုသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည်တစ်ဦးခြင်း simulation ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးပေါ်မှာ swinging ထို့နောက်တစ်ဦးရိုက်နှက်သောသံတူသည်နှင့်အတူပျက်စီးရသောလုပ်ပါတယ်ပန်းပု, ။ ဤအပန်းပုအရေအတွက်တဖြည်းဖြည်းနေသမျှကာလပတ်လုံး PC ကို Processor ကိုအဆိုပါပန်းပုအပေါ် miscalculation ထိုးနှက်တူ၏တာဝန်များကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှအဖြစ်တိုးမြှင့်ထားသည်။
နောက်ထပ်အခြေခံစံနှုန်း, ရေခဲပြင်မုန်တိုင်း, ဒီအချိန်လုံးဝ Cross-platform, ကလုနီးပါးအပေါ်ကို run နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်မည်သည့် device ကို။ ၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကျွန်တော်တို့ကိုစမတ်ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ဘယ်လောက် CPU နဲ့ဂရပ်ဖစ်ချစ်ပ်များကိုအကြောင်းကိုအများအပြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာဆီးအတားမရှိစိတျအပိုငျးမှအဖြေပေးစေခြင်းငှါခွင့်ပြုပါတယ်။ သူကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများ၏ operating system ကိုထိခိုက်စေခြင်းအလိုငှါလူအပေါင်းတို့သည်အချက်များရှင်းလင်းစေပါတယ်။ အသုံးပြုပါကကျစ်လစ်သိပ်သည်း gadgets, ဒါပေမယ့်လည်းအဟောင်းသို့မဟုတ် Low-ပါဝါကွန်ပျူတာပိုင်ရှင်များ၏အသုံးပြုသူများအတွက်သာအကြံပြုသည်။
720 pixels ကို× 1280 မှာ run က default, ရေခဲပြင်မုန်တိုင်းအသုံးပြုပုံကဒေါင်လိုက်ထပ်တူပြုခြင်း setting များကိုပိတ်ထားသည်, နှင့်ဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ်အသံအတိုးအကျယ်နှုန်းထက်ပိုမ 128 MB အထိလိုအပ်သည်။ အဆိုပါ PC ကို DirectX ကို 11 ထား, သို့မဟုတ်၎င်း၏စွမ်းရည် Direct3D9ဗားရှင်းမှာပိုကန့်သတ်နေစဉ်, OpenGL အင်ဂျင်ကိုသုံးပြီး rendering များအတွက်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများ။
ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်နေတဲ့ဂရပ်ဖစ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအရိပ်နှင့်ထိပ်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်က rendering ဒုတိယ Post-အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်ပြောသည်မှုန်ဆိုးကျိုးများအတွက် check လုပ်ထားသည်။
နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ သူလေးကသီးခြားချည်များတွင်အမျိုးမျိုးသော Simulator ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီခြင်း simulation ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရင်ဆိုင်ရသည့်ရေနွေးငွေ့နှင့်ရေနွေးငွေ့ပျော့စိုင်အခဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်။
ဒီစမ်းသပ်မှု၏တစ်ဦးထက်ပိုအစွမ်းထက်ဗားရှင်းကရေခဲပြင်မုန်တိုင်းလွန်ကဲဟုခေါ်သည်လည်းရှိပါသည်။ အတည်ပြုချက်ကိုမှဘာသာရပ်ဒီစမ်းသပ်မှုမှာ Android သို့မဟုတ်က iOS ပေါ်မှာ run နေကြသည်ကိုသာအပါဆုံးခေတ်သစ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်, ဒါခေါ် flagship မှနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်း API ကို
တစ်ဦးချင်းစီသည် frame များအတွက်ခေတ်သစ်ဂိမ်းကွဲပြားခြားနားသောအချက်အလက်များ၏ရာပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုတောင်းခံပါ။ ဒီထက်အောက်က API ကိုဖြစ်တယ်, ဒါမဲနှိုက်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကဖန်တီး frames များကိုခေါ်ဆိုသည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုမှတဆင့်, သင်ကွဲပြားခြားနားသော API ကို၏စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဂရပ်ဖစ်ကတ်များတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်အသုံးပြုမပေးပါ။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဓြှု။ ကြီးမားသောနံပါတ်များအတွက်မဲနှိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားလက်ခံတွေ့ဆုံသည့် API ကို၏တဦးတည်းကိုယူပါ။ အချိန်ကျော်က frame rate ကို 30 နှုန်းဒုတိယထက်နိမ့်နစ်စတင်ပါဘူးကဲ့သို့သောအချိန်အထိ API ကိုအပေါ်ဝန်တိုးပွားစေပါသည်။
စမ်းသပ်မှု၏အကူအညီကိုသူတို့ကွဲပြားခြားနားသော API ကိုဘယ်လိုပြုမူတူညီတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်နှင့်အတူ။ တချို့ကခေတ်ပေါ်ဂိမ်း API ကိုအကြားအကူးအပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးခြင်းကို DirectX ကို 12, စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်မအတွက်အသစ်တခု Vulkan သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုနှင့်အတူဥပမာအားဖြင့်အသုံးပြုသူကအကူးအပြောင်းလိမ့်မယ်ရှိမရှိနားလည်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းမှ PC ကိုလိုအပ်ချက်ကဒီစမ်းသပ်မှုများအတွက်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ နိမ့်ဆုံးမှာအတူတူပင်ဂရပ်ဖစ်ချစ်ပ်မှ RAM နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကတ် 6GB, ထက်နည်း 1 GB ကိုမပေးကြောင်းမှတ်ဉာဏ်ပမာဏ, ရက်စွဲအထိဖြစ်နှင့် API အနည်းဆုံးတစ်စုံ၏ပံ့ပိုးမှုရှိရမည်။
အားလုံးနီးပါးအထက်ဖော်ပြထားတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းသရုပ်ပြ subtests ၏နံပါတ်အပြင်ဆံ့။ သူက Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသောလူတိုင်းအခြေခံစံနှုန်း 3DMark ၏အစစ်အမှန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြသနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အရေးယူပြန်ကစားတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်များသောအားဖြင့်ထို့နောက်အသုံးပြုသူရဲ့ PC ကိုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ထက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဂရပ်ဖစ်တွေ့နိုင်ပါသည်ဗီဒီယိုအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာစမ်းသပ်မှု၏အသီးအသီး၏အသေးစိတျသို့သွားသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ switch ကို switching အားဖြင့်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
tab ကို "ရလဒ်များ" ဒါဟာအားလုံးအသုံးပြုသူဖျော်ဖြေချမှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုလျစ်တဲ့သမိုင်းဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်က load နှင့်အခြား PC ပေါ်မှာကောက်ယူခဲ့ယခင်ကကောက်ယူစမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ tab မှာ, သင်အခြေခံစံနှုန်း 3DMark ၏နောက်ထပ်ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သင်ကကွန်ပျူတာ၏ system ကိုသတင်းအချက်အလက် scan မှဖြစ်စေ, ထို site ပေါ်တွင်စစ်ဆေးခြင်း၏ရလဒ်များကိုဖျောက်ရန်ရှိမရှိ configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းယင်းစမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းအသံပြန်ဖွင့်ချိန်ညှိ program တစ်ခုဘာသာစကားရွေးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးထက်ပိုရှိပါတယ်လျှင်ဒါဟာအစ, အစစ်ဆေးခံရတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကတ်အရေအတွက်ဖော်ပြသည်။ တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်မှုစစ်ဆေးနေခြင်းနှင့်ကို update ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုရှိပါတယ်။
High-end PC ကိုအဘို့နှင့်ဆီးအတားမရှိအဘို့အစမ်းသပ်မှု၏အဖြေအမြောက်အများ;
ကွဲပြားခြားနားသော Operating System ကိုအပြေးမိုဘိုင်းဖုန်းများရောဂါ;
ဝန်ထမ်းမဆုပ်အနစ် Futuremark ရဲ့ 3DMark တစ်ဦးချင်းစီဗားရှင်းသစ်တွေနဲ့ပိုမိုလွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာသည့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်, ဖွံ့ဖြိုး။ ဒါကအခြေခံစံနှုန်း - နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုစံနှုန်း, အားနည်းချက်များမှုမဟုတ်သော်လည်း။ ထိုအပင်ကိုပိုပြီးဒါ - ကွဲပြားခြားနားသော Operating System ကိုအပြေးစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet စမ်းသပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
3DMark အခမဲ့ Download
TFT Monitor စမ်းသပ်ခြင်း AIDA64 SiSoftware စန်ဒရာ Dacris benchmark
3DMark - စမ်းသပ်ခြင်းကို PC performance ကိုများနှင့်အံ device များအတွက်တစ်ဦးလူကြိုက်များ Multi-အခြေခံစံနှုန်း။
အရွယ်အစား: 3891 ကို MB